Baarlamaanka oo ku dhawaaqay shuruudaha laga rabo musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Baarlamaanka oo ku dhawaaqay shuruudaha laga rabo musharixiinta madaxweynaha Soomaaliya
Xildhibaaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa ka dooday arrimo xasaasi ah oo la xiriirta doorashada madaxweynaha iyo tan guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Qodobada xasaasiga ah oo ay maanta xildhibaanada ka doodeen ayaa waxaa ka mid ahaa lacagta shuruuda looga dhigaayo inuu bixiyo musharax kasta oo tartamaya.
Dood dheer kadib xildhibaanadaasi ayaa isku raacay inay meel mariyaan soo jeedintii madaxda madasha qaran, taas oo dhigeeysay in musharax kasta oo doonaya inuu u tartamo xilka madaxweynaha Soomaaliya inuu bixiyo 30 kun oo dollar.
Sidoo kale, musharixiinta iyagana u tartamaaya guddoonka baarlamaanka cusub ee labada Aqal ayaa iyagana lagu xiray inay bixiyaan 15 kun oo dollar.
Xildhibaanada labada Aqal ayaa sidoo kale isku raacay in musharax kasta laga doonayo inuu helo 20 xildhibaan saxiixooda, iyadoona xildhibaan kasta oo wax dooranaayo loo ogolaan doono in illaa seddax musharax uu siin karo saxiixiisa.
Illaa 12 xildhibaan oo cusub ayaa sidoo kale kulanka maanta lagu dhaariyay, kuwaas oo aan hore uga qeyb-gelin dhaartintii hore ee xildhibaanada labada Aqal.
Kulanka kan xiga ayay xildhibaanadu yeelan doonaan kadib markii lasoo dhamaystiro xildhibaanada harsan ee kasoo jeeda deegaanada gobolada waqooyi ee Somaliland.
Ugu dambeyntii, baarlamaanka ayaa sheegay in xilliga ay dhici doonaan doorashada guddoonka labada Aqal iyo tan madaxweynaha ay soo saari doonaan guddiga baarlamaaniga ah ee golaha uu ku dhawaaqi doono.